Niampanga an’i Vladimir Putin Ve Ny Mpiantsehatra Malaza Indrindra Ao Rosia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2014 0:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Swahili, 繁體中文, 简体中文, English
Iray amin'ireo mpiantsehatra malaza ao Rosia i Konstantin Khabensky. Ny tena hahafantaran'ny mpijery iraisampirenena azy dia ny filalaovany ao amin'ny sarimihetsika Jery alina jery andro notontosain'i Timur Bekmambetov. Nanana anjara bitika ihany koa izy tany amin'ny sarimihetsika tandrefana tahaka ny “Tinker Tailor Solider Spy” sy “Wanted”. Tamin'ny 15 Marsa 2014, andro iray mialoha ny fitsapakevibahoakam-pisintahana tao Krimea, nisy hafatra nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy heverina fa an'i Khabensky, izay iampangany an'i Vladimir Putin sy nanehoany fanohanana an'i Ukraine. Nanaraka kely izany dia namoaka i Khabensky fa feno mailaka fankahalana ny boatin-kafatra antserasera, taorian'ny lahatsoratra nataony manokana an'i Ukraine.
Raha handray ohatra, mihoatra ny 500 ny olona fanta-daza ara-kolontsaina vao nanasonia taratasim-bahoaka milaza ny fanohanany ny ataon'i Putin momba an'i “Ukraine sy Krimea.” Nivoaka tao amin'ny haba-tranonkala ofisialin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny taratasy ary miaraka amin'ny lisitr'ireo nanasonia. Namaly tamin'ny famoahana taratasim-bahoakany, nanango-tsonia avy amin'ny olona fanta-daza ho manohitra ny ady, ahitana mpiantsehatra sy mpitendry mozika sasantsasany ihany koa ny gazetin'ny mpanohitra Novaya Gazeta, nefa nahazo ihany koa ireo mpanao gazety liberaly namany.
Ny lazan'i Khabensky sy ny teny mahitsy nampiasaina hanamelohany an'i Kremlin, anefa, no mametraka ny fanambarana nataony ho zavatra manokana. Izany no fanambarana nataon'olomangan'ny kolontsaina — fa tsy ngonongonon'ireo avy amin'ny zanakolontsaina Rosiana sasany. Nanampy tamin'ny fanomezana endrika ny lalao olaimpikan'i Sochi i Khabensky, izay nanaovany dokambarotra ho an'i MegaFon ary ny nisehoany tao amin'ny lahatsarin'ny Olaimpika nanasongadinana mpiantsehatra Rosiana mpitari-dalana nilalao ireo fotoana manandanja teo amin'ny tantara rosiana. Indrindra moa fa nametraka ny fanambaran'i Khabensky eo amin'ny tantara be mpamaky indrindra ny vavahadim-baovao NewsRu.com . (Amin'izao fotoana anoratana izao dia mbola mitana ny sangany hatrany ilay lahatsoratra.)
Fa misy ihany ny antony matanjaka ahafahana miahiahy fa tsy i Khabensky no nanoratra ilay lahatsoratra pro-Ukraine, anti-Putin ao amin'ny Vkontakte. Milaza ho “pejy ofisialy” ilay kaonty tononina eto, mampiseho marika fanamarihana maitso araka izay tratrany, saingy tsy tahaka izany no fomba famantaran'ny Vkontakte ny pejy ofisialy. Diniho ny fitsipiky ny [politikan'ny] habaka dia ho hitanao fa manamarika ny pejy ofisialy amin'ny fametrahana marika fanamarinana manga eo ankavanana manaraka ny anaran'ny mpiserasera indrindra ny Vkontakte. (Jereo ny pehin’ny praiminisitra Dmitri Medvedev ho ohatra mazava amin'izany.)